Shina aluminiana midina Fantsom-baravarankely Ares83 orinasa sy mpamatsy | Kinzon
Mivadika eo amin'ny varavarankely aidina misy ny aluminium Ares83
Ny aluminiam-baravarana midina aidina Ares83 dia samy miasa sy maharitra. Ny farany ambany varavarankely fitehirizam-bokatra noho ny ampahany mihetsiketsika, ny fikosoham-baravarankely aluminiary dia endrika famolavolana mahazatra izay mifanentana amin'ny ankamaroan'ny fomba maritrano. Ireo sela fandefasana mikasa amin'ny lozisialy fantsom-pifanarahana kely mety tsara amin'ny lalana aluminium, manome lanja fanokafana sy fanidiana.
Aluminium midina amin'ny varavarankely tetezana-Ares83
Aluminium midina eo am-baravarankely
China Top marika / marika alemà
Rollers tsara indrindra
Ampiasao ny kodiarana mitondra kodiarana ary esory moramora.
Co-coated / Anodized / Electrophoresis / PVDF
Rano fanoherana ny rano
5.U-Vidiny <w / m2.k
5mm + 9A + 5mm & fitaratra tokana
Famindrana tsara indrindra
Misy ny mombamomba ny tohatra azo hialana amin'ny rano sy ny vovoka ho an'ny Aluminium midina amin'ny fikandrananao
Ny serivisy OEM natolotra ny serivisy natolotra natolotry ny mpividy mividy
Ny aluminiam-baravarana midina aidina Ares83 dia samy miasa sy maharitra. Ny farany ambany varavarankely fitehirizam-bokatra noho ny ampahany mihetsiketsika, ny fikosoham-baravarankely aluminiary dia endrika famolavolana mahazatra izay mifanentana amin'ny ankamaroan'ny fomba maritrano. Ireo sela fandefasana mikasa amin'ny lozisialy fantsom-pifanarahana kely mety tsara amin'ny lalana aluminium, manome lanja fanokafana sy fanidiana. Ny toetr'andro feno voahidy manodidina ny rindrina mba hanamaivana ny fandokoana, ny vovoka ary ny fidirana anaty rano, ny aluminium amin'ny fantsom-baravarankely midina misy tombon-kase mifono amin'ny tanjaky ny fikandrana. Mety amin'ny toerana misy ny toerana voafetra, ny aluminium eo amin'ny varavarankelin'ny sliding varavarankely dia mety ho ilay endrika famolavolana ataonao amin'ny laundry, efitra fandroana ary lakozia.
Finzone aluminium mipetaka eo am-baravarankely fitodinana dia vokatry ny fampandrosoana maharitra vokatra sy ny mpampiasa efa ampolo taona. Misaotra ny mpanjifa afa-po iray tapitrisa mahery avy amin'ny firenena 40 mahery, i Finzone no lasa iray amin'ireo aluminiana malaza indrindra amin'ny fikandranam-baravarankely manerantany. Ny kalitao tsy miovaova sy ny fampandrosoana maharitra ny vokatra dia tena nandoa vola. Ny aluminiana Finzone mipetaka eo am-baravarankely iray dia aseho amin'ny endrika kanto, faharetana ary fahatsoran'ny mpampiasa.
Ny traikefa dia mitovy amin'ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Finzone aluminium mipetaka eo am-baravarankely fitodihana dia manana mpanjifa maherin'ny iray tapitrisa avy amin'ny firenena 40 sy traikefa 20 taona. Ny aluminiana Finzone mipetaka eo am-baravarankely mitsangantsangana isaky ny dingana, tohanan'ny fahalalana sy ny traikefa azo avy amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana roa taona.
Previous: Vendrana Sliding Window Ares80
Manaraka: Aluminum Vertical Sliding Window Ares85
Fantsona Aluminum Ares80
Varavarankely fitaratra varavarankely Ares80-1
Fantsom-baravarankely mifono vy Ales80-1